China ZZ Eco Products Compostable tableware Biodegradable 32 OZ Natural Bagasse Bowl, ndị na-emepụta 500pcs / Carton | ZHONGSHENG
ZZ Eco Ngwa Compostable tableware Biodegradable 32 OZ Natural Bagasse Bowl, 500pcs / Carton
Ihe adighi: PB32
Size: 204.4 * 59.3mm
Ogo katoonu: 48 * 42 * 21.5cm
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịdị mma nke ngwaahịa a na-atụfu na enweghị mmetụta gburugburu ebe obibi nke rọba ma ọ bụ ụfụfụ, lee anya karịa ZZ Eco Products PB 32 oz. nnukwu akpa bagasse. Ejiri akpa bagasse, nke ndi okpete na - eme nri, ma ihe a nwere ike igbanye ma biodegradable, nke ga - enyere gi aka belata ugba ahihia gi. Ọ na-achọ obere ume ala iji mepụta karịa ngwaahịa rọba iji chekwaa ike na akụrụngwa. Nke a bu ezigbo uzo ozo diri ahihia ma obu uhere. Ntọala obula choro ihe otutu eji udiri ihe oriri.
Zuru oke maka ma nri ọkụ ma oyi, nnukwu efere a bụ ezigbo ihe ngwọta maka ụlọ oriri, caterers na delis na-enye ihe ọ bụla site na salads ruo osikapa ma ọ bụ pasta. Site na iji ụkpụrụ eji edobeghị ya, ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị banyere ihe dị iche iche ma ọ bụ agba na-agwakọta na onyinye ịbịanye aka gị. Jiri 32 oz a na-eji nri dị ụtọ, akụkụ, na ihe ụtọ. nnukwu efere. Ọ ga - enyere gị aka ịkwalite nkwado na ijere ndị ahịa ozi nke ọma.
1.E nwere ụzọ atọ dị iche iche nke usoro isiokwu a, nnukwu efere salad 24OZ, Ø204.4 * 41.8mm, ibu 23g / PC; Nnukwu salad salad 32OZ, Ø204.4 * 59.3mm, ibu 25g / PC; Mpekere salad 40OZ, Ø204.4 * 70.8mm, ibu 30g / PC. Enwere ike ịkụnye ụdị salad atọ dị n'otu mkpuchi PET; ọ dabara adaba iji zụta mkpuchi ahụ.
2.Obibi ndu okike. A na-atụfu ihe ndị na-emepụta ihe na-emebi ihe n’ahụ́ osisi ma nwee ike mebie ya kpamkpam, na-agbanwe ala fatịlaịza na ahịhịa, na-azụlite ala na-eme nri, nke bara uru na nguzozi ihe ọkụkụ. Ọ nwere ike dozie nsogbu mmetọ a na-eweta site na igbe nri ngwa ngwa EPS foam. Akụrụngwa na-esite na eriri ahịhịa, a napụrụ ya site na okike, ihe okike na gburugburu ebe obibi, enwere ike iji ya mee ihe -20 ~ 200 can, enwere ike iji ya mee ihe maka ikpo ọkụ na ngwa nju oyi, akụrụngwa nke ahịhịa anaghị ahapụ nsị na ihe ojoo. eji eme ihe. Mgbe ejiri ngwaahịa ahụ kọchaa, ala ahịhịa ma ọ bụ ahịhịa ga-emebi ya kpamkpam, laghachi na okike.
Ihe A. A. A na-eme site na eriri osisi 100%. Na-abụkarị akụrụngwa bụ okpukpu 80% okpete agwakọta na eriri ngị. Anyị nwere ike ịme akpa okpete 100% ma ọ bụ 100% akwa achara.
Ngwaahịa B.Our na-ete mmanụ na-enweghị mmiri. 120 ℃ mmanụ na 100 ℃ na-eguzogide mmiri.
C. Ngwaahịa anyị dị mma-arụ ọrụ nke gburugburu ebe obibi, ihe ndị na-adịghị egbu egbu, ịdị ọcha, enweghị ihe nchekwa, ọ nweghị emerụ ahụike.
Enwere ike iji ngwaahịa D.Our na microwave, oven na friji.
E. Akụ ala bụ ihe na-adigide. Mmanụ okpukpu na eriri achara na-esite n'okike, sitekwa na ahịhịa, ha na-alaghachi n'okike.
3. E nwere ike ịhọrọ agba abụọ, agba ọcha (ọcha) na ụcha eke (enweghị ntụpọ). Agba ndị ọzọ na-ewu ewu n'oge a, mana ụcha eke na-enwetawanye ewu ewu.
4. Anyị na-anabata nhazi. Anyị nwere ike inyere gị aka imepụta ihe ọhụụ, ma nwee akara gị. Anyị nwere ike ịme obibi akwụkwọ. Nwere ike ịnwe akara nke gị na ngwaahịa. Maka ugbu a, akwadoro ibi akwụkwọ na-acha otu agba. Ejiri FDA gbaara ya akwụkwọ.
Nke gara aga: ZZ Eco Ngwa Compostable tableware Biodegradable 40 OZ Natural Bagasse Bowl, 500pcs / Carton
Osote: ZZ Eco Ngwa Compostable tableware Biodegradable 24 OZ Natural Bagasse Bowl, 500pcs / Carton
ZZ Eco Ngwa 32 OZ Square Ebere Sugar / ...
ZZ Eco Ngwaahịa 42 OZ Square Ebere Sugar / ...